M.2 SSD အကြောင်း – eazycorner
M.2 SSD ဆိုတာ
ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အချက်အလက်တွေကို သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပညာ (storage technology) ထဲက M.2 SSD အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုပဲ အရင် ပြောရပါမယ်။ M.2 SSD ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာ ကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့ ပီကေအပြားအချောင်း( Chewing gum) ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ SSD အချောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို သေးငယ်ပါးလွှာတဲ့ပုံစံ ပြုလုပ်ထားလို့ ပေါ့ပါးပြီး အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ laptop, notebook, NUC(Next Unit of Computing) နဲ့ ultra book ကဲ့သို့သော ကွန်ပျူတာတွေအတွက် စံပြုပုံစံ ဖြစ်လာစေပါတယ်။ M.2 SSD ဟာ ၂.၅ လက်မအရွယ် SSD သို့မဟုတ် HDD တွေထက် နေရာယူမှုလျော့နည်းပြီး သိမ်းဆည်း‌နိုင်မှုပမာဏကိုလည်း2TB အထိ တိုးမြှင့်နိုင်ပါ တယ်။
M.2 SSD က အခြား SSD ထက် ပိုမြန်သလား?
အခု ကျွန်တော်တို့ M.2 SSD ဆိုတာ ဘာလဲသိသွားပြီးပြီဆိုရင် M.2 SSD ဟာ ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့ အခြားသော SSD တွေထက် ပိုမြန်သလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးကို ဖြေပေးချင်ပါတယ်။ အဖြေကတော့ ပိုမမြန်ပါဘူး။ M.2 ဟာ SSD ပုံသဏ္ဍာန်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
M.2 SSD ပုံစံနှစ်မျိုး
M.2 SSD ပုံစံနှစ်မျိုးရှိပြီး SATA နဲ့ NVMe တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မတူညီတဲ့ အချက်အလက် သိမ်းဆည်းမှု နည်းပညာ (storage technology) တွေကို အသုံးပြုထားကြပါတယ်။ သူတို့မှာ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေ ကိုယ်စီရှိကြလို့ ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ငွေသုံးစွဲနိုင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်သုံးစွဲ ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအနေနဲ့ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ mother board မှာ M.2 တပ်ဆင်လို့ရမယ့် slot ပါမပါနဲ့ ဘယ် M.2 ပုံစံသုံးရမယ်ဆိုတာ စစ်ဆေးဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။
SATA M.2 SSD ကို SATA interface အတိုင်း အသုံးပြုထားပြီး သူ့ရဲ့ အမြင့်ဆုံး data transfer rate ကတော့ တစ်စက္ကန့်ကို6Gb ဖြစ်တာကြောင့် အသစ်အသစ်သော interface တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ နှေးကွေးပါတယ်။ SATA based SSD များဟာ interface အတူတူအသုံးပြုထားတဲ့ hard drive တွေထဲမှာတော့ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်းမှာ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း SATA based SSD တွေဟာ spinning disk hard drive တွေထက်တော့ ၃ ဆမှ ၄ ဆထိမြန်ဆန်ပါတယ် SATA SSD များဟာ NVMe SSD များထက် ပိုမိုရရှိနိုင်ပြီး ပိုမိုလက်ခံအသုံးပြုကြပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ကွန်ပျူတာမှာ 2.5 inch SSD တပ်ဆင်ဖို့အတွက် နေရာမရှိရင်တော့ SATA M.2 SSD ဟာ အကောင်းဆုံးသော ပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
SATA သည် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုနည်းပညာအတွက် အခြေခံဆက်သွယ်မှုအဖြစ် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ SATA drive များသည် အလုပ်လုပ်ရန်အ‌တွက် ကြိုး ၂ ချောင်းလိုအပ်ပါတယ်။ ကြိုးတစ်ချောင်းဟာ data တွေကို motherboard ဆီကိုပို့ဆောင်ဖို့အသုံးပြုပြီး အခြားကြိုးတစ်ချောင်း ကတော့ power supply unit (PSU)ကနေ power ရဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ Multiple SATA storage drive တွေကိုအသုံးပြုရာမှာ ကြိုးတွေရှုပ်ပွနေခြင်းက ပြဿနာတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပြီး ဒါဟာ PC ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်မှုရှိစေပါတယ်။ Ultra book အပါအဝင် ပါးလွှာတဲ့ notebook နဲ့ laptop တွေမှာ ဘာလို့ M.2 form ကိုအသုံးပြုရသလဲဆိုရင် SATA ကြိုးတွေအတွက် နေရာပေးစရာ မရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ SATA M.2 SSD တစ်ခုဟာ ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ SATA based storage device တွေလို ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုး ၂ ချောင်းမပါတော့တဲ့အတွက် ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း M.2 SSD ဟာ SATA SSD ဆိုတာမပြောင်းလဲသေးပါဘူး။ SATA နဲ့ NVMe M.2 SSD တို့ရဲ့ အဓိကခြားနားချက်ကတော့ interface နည်းပညာနဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအဆင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ SATA M.2 SSD ဟာ SATA based interface နည်းပညာကို အသုံးပြုနေသေးတာကြောင့် NVMe M.2 SSD နဲ့ သူ့ရဲ့ အမြန်နှုန်းနဲ့ စွမ်း‌‌ဆောင်ရည်ကို‌ နှိုင်းယှဉ်ရာမှာ တိုးတက်မလာသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
NVMe M.2 SSD ဟာ SSD အတွက် အထူးပုံစံပြုလုပ်ထားတဲ့ NVMe protocol ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ PCle bus တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ NVMe SSD ဟာ နောက်ဆုံးပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ အမြန်နှုန်းအဆင့်တွေကို ရရှိစေပါတယ်။ NVMe SSD များဟာ PCle socket များကိုအသုံးပြုပြီး system CPU ကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် SSD SATA communication driver ကိုအသုံးပြုတဲ့ SSD ကို PCle socket တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်တောင် NVMe ထက် နှေးနေဦးမှာပါ။
နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် NVMe M.2 SSD ဟာ SATA M.2 SSD ထက် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုသာလွန်ပါတယ်။ PCle bus နဲ့ချိတ်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင် NVMe M.2 SSD ရဲ့ သီအိုရီအရ transfer speed ဟာ တစ်စက္ကန့်ကို 20Gb အထက်ရှိတာကြောင့် transfer speed တစ်စက္ကန့်မှာ 6Gb သာရှိတဲ့ SATA M.2 SSD ထက် မြန်ဆန်နေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ PCle bus တွေဟာ 1x, 4x, 8x နဲ့ 16x lanes တွေကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ PCle 3.0 သည် lane တစ်ခုလျှင် 985Mb/s အထက် transfer speed ရှိတာကြောင့် ကနဦး transfer speed ဟာ တစ်စက္ကန့်လျှင် 16GB အထက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း M.2 form factor အား PCle bus နဲ့အသုံးပြုရာမှာ ×2 နဲ့ ×4 lanes တွေကိုသာ အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် အမြင့်ဆုံး transfer speed သည် တစ်စက္ကန့်လျှင် 4GB အထက်ဖြစ်ပါတယ်။
NVMe က SATA ထက်မြန်သလား? နည်းပညာပိုင်းအရ မြန်ပါတယ်။ NVMe drive တွေက တစ်စက္ကန့်လျှင် 3500MB အထက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ချိန်တွင် ခေတ်မီ motherboard များတွင်တပ်ဆင်ထားသည့် SATA III သည် တစ်စက္ကန့်တွင် အမြင့်ဆုံး 600MB သာဖြစ်သည်။ Form factor ကိုထည့်မတွက်လျှင်တောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအဆင့်သည် SATA SSD ထက် ပိုမြင့်သည်။ NVMe နည်းပညာအသုံးပြုထားသည့် SSD များသာ SATA based SSD များ၏ transfer speed ကိုကျော်လွန်နိုင်သည်။
SATA M.2 SSD နဲ့ NVMe M.2 SSD တို့အကြား ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအချက်များကို စဉ်းစားရပါမယ်-
System support – စက်ပစ္စည်းအဟောင်းတွေဟာ NVMe PCle socket တွေအသုံးပြုဖို့ လိုအပ်တဲ့ တပ်ဆင်စရာတွေ မပါတဲ့အတွက် NVMe နဲ့ compatible ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Quick start-up – သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို boot လျှင်မြန်စွာတက်ဖို့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ OS (Operating system) ကို SSD ပေါ်မှာ install လုပ်ရမှာပါ။ NVMe SSD နဲ့အတူ အရမ်းမြန်ဆန်မှုတွေကို သင်တွေ့ရမှာပါ။
Prioritise storage – သင်ဟာ NVMe SSD တစ်ခုကို အခြား SATA SSD တစ်ခုနဲ့ ပေါင်းစက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ သင့်ရဲ့ OS နဲ့ အရေးကြီးတဲ့ program‌ တွေနဲ့ application တွေကို NVMe SSD ပေါ်မှာ install လုပ်နိုင်ပြီး SATA SSD ကိုတော့ သေးငယ်ပြီး သိပ်အရေးမကြီးတဲ့ file တွေ document တွေကို သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။
Gaming advantages – သင်ဟာ NNMe M.2 SSD ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Game loading ပြုလုပ်ချိန်မှာ အရမ်းမြန်ဆန်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ NVMe drive ပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့ Game တွေဟာ သင်တို့ရဲ့ game တွေကို သိမ်းဆည်းထားတဲ့နေရာကနေ ပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာ transfer speed ကြောင့် အရမ်းကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
PCle generation – PCle bus generation အဆင့်တွေ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ SSD မှာအသုံးပြုတဲ့ PCle generation တိုင်းဟာ bandwidth နှစ်ဆစီ ခြားနားကြပါတယ်။ ခုနောက်ဆုံးပေါ်ကတော့ PCle 4.0 နဲ့ PCle 5.0 တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Shared connections – အချို့သော motherboard များသည် NVMe drive အများအပြားတပ်ဆင်နိုင်ရန် PCle connection များ အလုံအလောက်မပါဝင်ကြပေ။ M.2 connection ကဲ့သို့သော NVMe device တွေကို သူတို့ရဲ့ အမြန်နှုန်းအပြည့်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ရရှိတဲ့ Pcle lane တွေအပေါ်မှာ ရွေးချယ် တပ်ဆင် ရမှုတွေလည်း ကြုံတွေရနိုင်ပါတယ်။